नुवाकोटमा नेपाली कांग्रेसका नेता केसीलाई हराएर खतिवडा विजयी – Dhadingnews.com – Exploring social, politics, agricultural, health, entertainment and district news of dhading.
प्रकाशित मिति: २४ मंसिर २०७४, आईतवार ०९:०३
नुवाकोट २४ मङि्सर : देशमा संविधान र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा मंसिर १० गते आइतबार नुवाकोटमा भएको मतदानको अन्तिम मत परिणाम आइतबार बिहान सार्वजनिक भएको छ। दुईवटा प्रतिनिधि सभा र चार वटा प्रदेश तह रहेको नुवाकोटमा वाम गठवन्धनका उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन्।
सोही क्षेत्रको प्रदेश क मा एमालेका केशवराज पाण्डे, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ को प्रदेश क मा माओवादी केन्द्रका राधिका तामाङ र सोही क्षेत्रको प्रदेश ख मा एमालेका बद्री मैनाली विजयी भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
२४ मंसिर २०७४, आईतवार ०९:०३ मा प्रकाशित